स्मृतिमा पचास वर्षअघिको नारायणगढ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
स्मृतिमा पचास वर्षअघिको नारायणगढ
२०७७ फाल्गुन ८, शनिबार १२:५७ गते
२०६८ फागुन २० गते भरतपुरमा चितवनबासीको प्रतिनिधित्व गर्दै “हाम्रो सिर्जना” त्रैमासिकले सुप्रशिद्ध प्रगतिवादी साहित्यकार आनन्ददेव भट्ट दम्पतीको अभिनन्दन गरेको थियो । आफ्नो युवावस्थाका ऊर्जाशील आठ वर्ष चितवनको शिक्षा र सामाजिक परिवर्तनका निम्ति खर्चेका भट्ट दम्पतीले चितवनबासीको त्यो सदाशय र स्नेहपूर्ण भावलाई त्यसै बिर्सन नसकेको हुनाले नै हुनुपर्छ चितवनलाई आधार क्षेत्र बनाएर कुनै परोपकारी कामका लागि थोरैतिनो सहयोग गर्न पाए कसो हुँदो हो ? भन्ने मनसाय प्रकट गर्नुभयो ।
सुरूमा उहाँहरुको आशय वीरेन्द्र कलेजका केही असहाय तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गर्ने गरी एउटा छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्ने कि ? भन्ने थियो । तर, त्यसरी प्रदान गरिने पुरस्कार एउटा संस्थामा मात्र केन्द्रित गरेर त्यसको दायरालाई सीमित पार्नुभन्दा व्यापक परिधिको बनाउन बेस हुने हितचिन्तकहरुको सल्लाह र सुझावअनुसार उहाँहरुले त्यसै गर्न सहमति जनाउनुभयो । तर, आनन्ददेव भट्ट आफूले गरेको सहयोगलाई प्रचारमुखी बनाउन अनिच्छुक हुनुहुन्थ्यो । थप, नेपाललाई एक सय चार वर्षसम्मको जहानियाँ राणा शासनबाट मुक्त गराउन आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरुप्रति उहाँका मनमा पहिलेदेखि नै अत्यन्त धेरै सम्मान र सद्भाव थियो र त्यो अद्यापि छ । शहीद दशरथ चन्द उहाँको पुख्र्यौली थलो बैतडीमा नै जन्मेहुर्केका हुनाले उहाँले तिनै महान् शहीदको नामसित जोडेर पुरस्कारको स्थापना गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो । तदनुरुप “शहीद दशरथ चन्द स्मृति पुरस्कार” स्थापनार्थ २०६९ सालमा उहाँहरुले दुई लाख रूपियाँ अक्षयकोषका लागि प्रदान गर्नुभयो ।
शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन माघ १६ गते प्रदान गरिने सो पुरस्कार पहिलोपटक पोखरालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर सिर्जनामा लागिरहेका समालोचक, निबन्धकार, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका प्राध्यापक डा. रविलाल अधिकारीलाई प्रदान गर्ने निर्णयअनुरुप “हाम्रो सिर्जना”का प्रधानसम्पादक तथा प्रकाशक डी. आर. पोखरेलका तर्फबाट काठमाडौँमा भट्ट दम्पतीका अतिरिक्त मलाई र प्रा.डा. खेम कोइराला “बन्धु” र अरूणा कोइरालालाई निमन्त्रणा प्राप्त भयो । तसर्थ, त्यही कामका सिलसिलामा हामी पाँच जना माघ १५ गते सडकमार्ग हुँदै नारायणगढ जाने कार्यक्रम बन्यो ।
यस अतिरिक्त हाल न्युजिल्यान्डमा बसोबास गरिरहेका डा. कृष्णदेव भट्ट, उहाँकी पत्नी, त्यहीँ बसी पढे हुर्केको तन्देरी युवा उनीहरुको कान्छो छोरो र हाल अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोमा बसी जागिर खाने अर्का युवा भट्ट परिवारका भाञ्जा, कथाकार सिर्जना शर्माका छोरासमेत नौ जनाको एउटा ससानो टोलीका हामी सहयात्री हुन पुग्यौँ । टिकट व्यवस्थापन मेरो भागमा प¥यो । साईबाबा ट्राभल्सको अफिसमा फोन गरेर टिकट बुक गरेँ । १५ गते बिहान पौने सात बजेभन्दा पहिले नै हामी सबै कान्तिपथ पुग्यौँ । निर्धारित समयमा नै सात बजे कान्तिपथबाट बस छुट्यो र यसरी हाम्रो भरतपुर यात्रा प्रारम्भ भयो ।
हाम्रो आजको गन्तव्य नारायणगढ भए पनि डा. कृष्णदेव भट्ट दम्पती, उहाँहरुको छोरो र भाञ्जाको यात्रा भने सौराहासम्मकै थियो । हाम्रा लागि चिरपरिचित सौराहा सामान्य ठाउँ भए पनि विदेशी र विदेश बस्ने नेपालीहरुका लागि भने आराम गर्ने, घुमफिर गर्ने, हात्ती चढ्ने अनि एकसिङ्गे गैँडालगायतका जङ्गली जनावरहरु हेर्ने केन्द्रका रुपमा परिचित छ । कृष्णजीका आग्रहमा मैले आफ्ना चिनाजानका साथीहरुको समेत मद्दत लिएर फोनबाटै होटल बुक गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएँ । भोलिपल्ट कार्यक्रम सकिएपछि हामी पनि त्यतै जाने सल्लाहसमेत मिलायौँ ।
दिउँसो एक बजे नारायणगढ उत्रेका हामी आआफ्ना झोला च्यापेर सोझै उद्योग वाणिज्य संघ नारायणगढको अतिथि गृहमा पुग्यौँ । ‘हाम्रो सिर्जना’ परिवारका तर्फबाट हाम्रालागि दुईवटा कोठा लिएर राखिएको रहेछ । तिनैमा आफ्ना झिटीझाम्टा थन्क्याएर हामी बाहिर निस्कियौँ ।
उद्योग वाणिज्य संघ नारायणगढको प्राङ्गणबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा विगतको एउटा सानु स्मृतिले आएर मनलाई हलुका किसिमले स्पर्श ग¥यो । मैले नारायणगढ बजारमा पाइला टेकेको पचास वर्ष पुगेछ । विसं २०२० सालमा म पहिलोपटक यस ठाउँमा आइपुग्दाको नारायणगढ बजारको स्वरुप अहिलेको तुलनामा बिल्कुलै फरक थियो । मूल बजारमा कताकति फाट्टफुट्ट पक्की घरहरु थिए । माथि लीलाचोकमा लीला होटल, बीच बजारमा कृष्णलाल प्रधान, कृष्णबन्धु पिया, केएल भूषण आदिका केही घरहरु, अल्लि तल बटुकलाल प्रधान, लालकुमार सुब्बा, हरिकुमार श्रेष्ठ र पुछारमा मुक्तिलाल चुके, श्यामकृष्ण प्रधान आदिका घर थिए । बीचतिर नेपाल बैंक, दिलमाया पुस्तक भण्डार आदि थिए । यो मेनरोडबाहेकको त्यतिबेलाको मुख्य बजार पुतलीबजार थियो ।
नारायणगढबाट भरतपुर निस्कने छोटकरी बाटो त्यही पुतलीबजारबाट पूर्व लागेपछि बाटो क्याम्पाचौरको किनारैकिनार दक्षिण–पूर्व ताकेर माथितिर ठडिन्थ्यो र खोलाको किनारैकिनार हाल आइल्यान्ड रिसोर्ट भएको ठाउँमा अवस्थित युएसएडको अफिसनेर निस्कन्थ्यो । यता, नारायणगढमा लीलाचोकनजिकै केही तल टिनले छाएको कालटेक्सको भुइँतले घर थियो, त्यो भने अहिले पनि उस्तै अवस्थामा रहेछ । त्यसबाहेक नारायणगढको स्वरुप बिल्कुलै फेरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ नारायणगढको हालको आकृति नेपालका अरु आधुनिक सहरका वाणिज्य संघको जस्तै छ । पार्किङसहितको निकै ठूलो मनमनाउँदो दुईतले सभाहल, चारतले अतिथि गृह, त्यही माफिकको कार्यालय भवन र करेसातिर भोजभतेर लगाउन मिल्ने, कम्पाउन्ड घेरिएको किचेनसहितको ओपन स्पेस । अहिलेको यो भव्य भवनको प्राङ्गणमा उभिएर हेर्दा पचास वर्ष पहिलेको “नारायणगढ व्यापार संघ”को स्वरुप यस्तो थियो भनेर सम्झाउन पनि निकै मुस्किल पर्छ ।
यो कम्पाउन्डको दक्षिण–पश्चिम कुनामा सानो एउटा चौतारो थियो । साँझ–बिहान घुम्न जाँदा हामी त्यसैका छपनीमा बसेर नारायणी नदीको दृश्यावलोकन गथ्र्यौं । उत्तरतिर एल आकारको एउटा सानो भवन थियो । सबभन्दा पश्चिमतिरको कोठामा अफिस । त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा गाउँले दाजु गजेन्द्रकुमार राजभण्डारी । त्यसैताक दक्षिण–पूर्वतिरको एक कोठामा नारायणी पुस्तकालय पनि सञ्चालन भएको सम्झन्छु म । पछि त्यो पुस्तकालय यहाँबाट सरेर कताकता पुग्यो, त्यसको सबै नालीबेली मलाई थाहा भएन ।
एकपटक केही वर्ष पहिले पुरानो बजारको पुछारमा रहेको श्यामकृष्ण श्रेष्ठको घरको पछाडितिरको भुइंँतलाको एउटा कोठामा अस्पतालको बेडमा सुतेको मदौरोझैँ त्यो पुस्तकालय धिकिरधिकिर अवस्थामा सञ्चालन भएको देखेको थिएँ मैले । हाल त्यसको अवस्था के छ त्यसबारे भने मलाई कुनै जानकारी छैन ।
डेढ बजेतिर खाना खाइसकेपछि फुक्काफाल भएका हामी अब के गर्ने भन्ने कुरा गर्दै थियौँ, डा. खेम कोइराला बन्धुले देवघाट जाने प्रस्ताव राख्नुभयो । उता २–३ घन्टाजति भुल्ने, जाँदा–आउँदाको समेत ५०० रूपियाँ दिने गरी एउटा भ्यान भाडामा लियौँ हामीले र त्यतै लाग्यौँ ।
देवघाट वारिपट्टि नै रहेछ स्वामी डा. महिधराचार्यको आश्रम । स्वामीजी राजनेता मदन भण्डारीका जेठा दाजु हुनुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी हामीले देवघाट पुग्नुभन्दा अगाडि नै पाइसकेका थियौँ । हामी गेटभित्र पस्तैगर्दा देख्यौँ स्वामीजी आश्रमको प्राङ्गणमा अरु दुई–तीन जनासँगै प्लास्टिकका कुर्सीमा बसेर घाम ताप्दै हुनुहुँदोरहेछ । हामी सबैले स्वामीजीलाई अभिवादन ग¥यौँ र खाली कुर्सीमा बस्यौँ । परिचयको क्रम सकिएपछि सामान्य भलाकुसारी चल्यो । त्यसपछि सुरू भयो जिज्ञासा राख्ने क्रम । जिज्ञासुका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा स्वामीजी निकै शालीन मुद्रामा प्रस्तुत हुनुभएको महसुस भयो हामीलाई । केही स्न्याप फोटो लिने र भिडियो खिच्ने काम पनि गर्न पुगेँ म ।
करिब दुई घन्टापछि हामी उहाँसित बिदा भएर हिँड्यौँ । सुशीला भट्ट र अरूणा कोइराला म्याडमहरु नदीको पानीले शिर सेँचन गर्न नारायणीतिर लाग्नुभयो, हामी तीन जना पारि जानका लागि पुलतिर सोझियौँ । फोटो खिच्दै हिँड्ने क्रममा म केही पछि परेको थिएँ । माघ मासको जाडोको पनि पर्वाह नगरी कछाड लगाएर हातमा नाम्लो लिएर पारिबाट यतातिर आउँदै गरेका एक वृद्धलाई देखेँ । हत्त न पत्त क्यामराको लेन्स उनीतिर तेस्र्याएर बटन दबाएँ । नजिकै आइपुगेपछि सोधेँ, “कति वर्ष पुग्नु भो ?”
“त्रिहत्तर” बिनाहिच्किचाहट जवाफ आयो ।
“अनि यो नाम्लो किन नि ?” फेरि सोधेँ ।
“यसो हातमुख जोर्नुपर्‍यो नि हजुर !” खिसिक्क हाँस्दै उनले भने ।
“अनि छोराहरु छैनन् ?” मैले थपेँ ।
“छन् नि, किन नहुनु ? मेरालागि छैनन् क्यारे । ब्वारीहर्का लागि छन् ।” खिस्स हाँसेर यसो भन्दै उनी मलाई पछितिर छाडेर साँगुको मुखतिर लागे । म जिल्ल परेँ र उनी गएको बाटोतिर हेर्दै बसेँ ।
देवघाटबाट फर्कंदा हामीहरु बाइपास रोड हुँदै भरतपुरतिर लाग्यौँ । मालपोत चोकबाट भ्यानलाई बिदा गरी पठायौँ र त्यसपछि हाम्रोे घर गयौँ । हुन त, यतिबेला हामी काठमाडौँमा बस्छौँ । ठूलो छोराबुहारी सपरिवार पोखरामा बस्छन् । तसर्थ, भरतपुरको हाम्रो घरबारी अरुले नै आबाद गुल्जार गरेका छन् । तसर्थ, घर जानुको कुनै विशेष प्रयोजन भने थिएन । तथापि, खास कुनै काम नभए पनि चितवन पुगेका बेला आफ्नो आँगन नटेकी मन मान्दैन ।
यो घर–घडेरीको पनि ससानो कथा छ । कतिपयका लागि यो त्यति सरोकारको विषय नभए पनि यतिबेला सुन्दा अलिकति रमाइलो भने लाग्न सक्छ ।
बाबुराम पाण्डेजी र म २०२४ सालतिर वीरेन्द्र कलेजमा पढ्थ्यौँ । फरक–फरक कक्षाका भए पनि हामी खुबै हितचित्त मिलेका साथी थियौँ, आजपर्यन्त छौँ । बाबुरामजीको बसोबास अहिले मेरो घर भएको ठाउँनजिकै थियो । मेरो भने कहीँ पनि थिएन । विसं २०२९ सालमा एकदिन हाम्रो भेट हुँदा पाण्डेजीले मलाई उहाँको घरनजिकै एउटा घडेरी किन्ने व्यवस्था मिलाई दिनुभयो । उहाँले त्यो घडेरी लिनका लागि मलाई कर गर्नुभयो । उहाँको आशय हामी दुई जना साथी नजिकै बसौँ भन्ने थियो । मैले त्यति चाहना नगरेको भए पनि एक प्रकारले भन्दा उहाँले मलाई करै लगाउनुभयो । साथीको आग्रहलाई टार्न नसकेको हुनाले मैले त्यो घडेरी बाध्यतावश नै किनेँ, दुई सय रूपियाँमा । एक वर्षजतिपछि पास गर्ने बेलामा जग्गावालाले मसित पचास रूपियाँ थप मागे ।
मैले इच्छा नलागी नलागी पचास रूपियाँ पनि थपिदिएँ र घडेरी लिएँ । पछि म २०३१ सालमा काठमाडौँ बिएड पढ्न जाँदा खर्चपर्चको अभाव भएको हुनाले घडेरी बेच्नुपर्ने स्थिति आइपर्‍यो । ग्राहक खोज्दै थिएँ, त्यतिबेलाका चितवनका शिक्षा अधिकारी नीरमर्दन बस्न्यातले मसित त्यसको मोल सोध्नुभयो । दुई सय पचासमा एक वर्ष पहिले किनेको घडेरी, चौबर बढी पाए दिनुपर्ला भन्ठानेर “एक हजार” भनेँ । उहाँले त्यो घडेरी मैले भनेकै मूल्यमा किन्नुभयो । त्यतिविधि नाफा पाएकोमा म खुबै मख्ख परेको थिएँ ।
पढाइ पूरा गरेर म तेत्तीस सालमा काठमाडौँबाट चितवन फर्कें । पटिहानीमा पढाउँदै थिएँ, घरबारविहीन हुँदाको पीडाले सताउन थाल्यो । अलिकति पैसाको जोहो गरेर २०३४ सालमा कृष्णपुरमा छब्बीस सय रूपियाँमा दुई कठ्ठा जमिन लिने तर्खर गर्दै थिएँ, शिक्षा अधिकारी नीरमर्दन बस्न्यातले त्यो कुरा थाहा पाउनुभएछ र एकदिन मलाई बोलाउन पठाउनुभयो । त्यसपछि म उहाँलाई भेट्न भरतपुर गएँ ।
“घडेरी लिन खोज्दै हुनुहुन्छ रे खनालजी, मैले त्यस्तै सुनेँ”, भेट भएपछि आफ्नो शैलीमा उहाँले मलाई सोध्नुभयो ।
“हो सर, मैले कृष्णपुरतिर लिने विचार गर्दैछु”, मैले भनेँ ।
“मैले त्यतिबेला तपाईंको काम चलाइदिएको मात्र हो, त्यो घडेरी तपाईंकै हो, त्यही आफ्नो घडेरी फिर्ता लिनुस्, अर्को किन किन्नु प¥यो ?” मसित उहाँले भन्नुभयो । बेचेको तीन वर्षपछि फेरि त्यही घडेरी कति दाममा किन्ने होला भन्ने कुराले म द्विविधामा परेँ । असजिलो मानीमानी दाम सोधेँ ।
“आफूले लिएको दाम दिने, अनि आफ्नो घडेरी लिने”, उहाँले सहज भावमा भन्नुभयो । म झन् असजिलोमा परेँ । हजार रूपियाँ मात्र दिएर लिन मेरो मनले मानेन । कम से कम अलिकति व्याज त दिनैपर्छ होला । यस्तै ठानेँ र अन्त्यमा उहाँसित नसोधीकन पन्द्र सय रूपियाँ दिएँ । यसरी कृष्णपुरतिरको कार्यक्रम छोडेर त्यसपछि भरतपुरको त्यो आफ्नो पुरानो घडेरी फेरि मैले नै फिर्ता लिएँ । पछाडिको खण्डचाहिँ मैले २०४३ सालतिर थपेको हुँ । हालको घर भने आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्तिबाट आफूले पाएको अंशले २०२९ सालमा छ हजार पाँच सयमा किनेको इन्द्रपुरीको एक बिगाहा जग्गा २०५० सालमा चार लाखमा बेचेर बनाएको हुँ ।
हामी चितवनमा नभए पनि हाम्रो घरको माथिल्लो तलामा हाम्रा आफन्त अधिवक्ता लक्ष्मण अधिकारीको बसोबास छ । हामी पुगेको केहीबेरमा नै हामी गफिन थालेको समयमा लक्ष्मणजीकी जहान अनिमाले फलफूल ल्याइन् । किन दुःख गर्नुपथ्र्यो र भन्दै हामीले त्यो फलाहार खायौँ । एकछिनपछि कालो चिया पनि आइपुग्यो । त्यसपछि नारायणगढ फर्कनका लागि मालपोत चोकबाट हामीले टेम्पो समात्दा झमक्कै साँझ परिसकेको थियो ।
माघ १६ गते आयोजना हुने “दशरथ चन्द स्मृति पुरस्कार” वितरण समारोहमा अनुपस्थित प्रमुख अतिथि भाषाविद् प्रा. बालकृष्ण पोखरेलको प्रतिनिधित्व गर्दै चारआली, झापामा सञ्चालित दशरथ चन्द उच्च माविका पूर्वप्राचार्य हालका सं.स. अध्यक्ष हरिचरण बानिया नारायणगढ आउने कार्यक्रम रहेछ । निजी साधन लिएर उताबाट निकै अबेला बाटो लागेका पाहुनाहरु नारायणगढ आइपुगेपछि स्वागत गर्ने जिम्मा मलाई लगाएर डी. आर. पोखरेलहरु भरतपुरतिर लागेपछि म राति अबेलासम्म पाहुनाहरुको बाटो हेर्दै बसेँ । मध्यरात कटेर साढे बाह्र बजेतिर मात्र आइपुगेका पाहुनाहरुलाई सत्कार गरी बिदा भएर आफ्नो कोठातिर लाग्दा एक बजिसकेको थियो ।
भोलिपल्ट साढे एघार बजे हुने भनिएको कार्यक्रम बाह्र बजेतिर मात्रै सुरू भयो । मञ्च र दर्शकदीर्घाको अग्रभागमा पाहुनाहरुको लर्को । आसन ग्रहणको धुमधाम निकै वाक्कलाग्दो थियो । फेरि पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा दुई–दुईवटा कृति विमोचनको च्याँखे पनि राखिएको रहेछ । सभाहलका अधिकांश खाली कुर्सीहरु देख्दा भने यस प्रकारका औपचारिक कार्यक्रमप्रति मानिसहरुको वितृष्णा जाग्दै गएको हो कि भन्ने भान पथ्र्यो । सभा सञ्चालनको प्रभावहीन शैलीको मारमा परेर प्रताडित बनेको त्यो कार्यक्रम झन्डै साढे दुई घन्टाजति चलेपछि समापन भयो र हामीले हलुङ्गोपनको अनुभव गर्‍यौँ ।
कार्यक्रम चलिरहँदा मलाई एकपटक आजभन्दा नौ वर्षअगाडि विसं २०६१ साल भदौमा यही सभाहलमा, यही ठाउँमा मेरो ५९औँ वर्ष प्रवेशको अवसर पारेर पूर्वका मोतीरामका नामले परिचित सुप्रशिद्ध भाषासेवी, झर्रो नेपाली आन्दोलनका प्रणेताहरुमध्ये एक चूडामणि रेग्मी र उहाँको सम्पादनमा निस्कने जुही एवं यथार्थ कुरा पाक्षिकका तर्फबाट गरिएको अभिनन्दन कार्यक्रमको सम्झना आयो । अनेक कठिनाइका बाबजुद पूर्व झापा र विराटनगरदेखि रेग्मीजीको नेतृत्वमा आएको करिब ३० जना पूर्वेली साहित्यकारहरुको जन्तीले बढो प्रेमपूर्वक हाम्रो (म र मेरी श्रीमती विजयाको) अभिनन्दन गरेको थियो । आजकै झैँ त्यो बेला पनि साहित्य संगम चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष डी. आर. पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको त्यस कार्यक्रममा आज डा. रविलाल अधिकारी दम्पती बसेझैँ म र विजया बेहुलाबेहुलीझैँ मञ्चमा बसेका थियौँ । उनन्साठीवटा मैनबत्ती बालेर हाम्रो अभिषेक गर्दै फूलमाला लगाइदिएपछि हामी त साँच्चै फेरि नयाँ दुलाहादुलहीजस्ता पो भयौँ कि जस्तो लागेको थियो मलाई त्यतिबेला ।
मलाई ढाका टोपी लगाइदिएर विजयालाई रातो सल ओढाइसकेपछि जयकला आचार्य एक थुन्से पुस्तक बोकेर मञ्चअगाडि आउनुभयो र पुस्तकैपुस्तकले भरिएको त्यो थुन्सेको भारी मलाई उपहार दिनुभयो । त्यतिबेला म त यतिधेरै भावुक हुन पुगेँ कि त्यो क्षणको त म यसबखत वर्णन गर्न पनि सक्तिनँ । त्यतिबेलाको एउटा खड्किँदो कुरा भने अझैसम्म पनि मनमा ठेस लाग्ने गरी आइरहन्छ । आयोजक जुही र यथार्थ कुरा भए पनि सह–आयोजक साहित्य संगम चितवनका तर्फबाट एक जनाले मन्तव्यका क्रममा “लेखकले त लेख्यो र उसलाई सम्मान गरियो भनौँ, तर लेखककी दुलहीलाई किन मञ्चमा राख्नु परेको होला ?” भन्ने नारीहरुप्रति गरिएको अभद्र टिप्पणी गरे । त्यो छुद्र प्रकारको टिप्पणी सुन्दा सबै श्रोताहरु स्तब्ध हुन पुगेका थिए । त्यसरी नै आज पनि कसैकसैले त डा. रविलाल अधिकारीसँगै मञ्चमा बसिरहेकी उहाँकी जीवनसाथी सम्झना अधिकारीतिर सङ्केत गर्दै त्यस्तै प्रकारको टिप्पणी गरेको सुनेँ मैले । मानिसहरुको मानसिकतामा लागेको वैचारिक दरिद्रताको कुहिगन्दे जालो कहिले च्यातिने होला भन्ने कुरा सोचेर म आफँै बिलखबन्दमा पर्छु कहिलेकाहीँ ।
कार्यक्रमको समापनपछि पहिले हामीले पूर्वका पाहुनाहरुलाई बिदा गर्‍यौँ, त्यसपछि आफूहरु पनि सौराहातिर लाग्यौँ ।
हाम्रा चालक विनोद परियार देश खाई शेष भएका बढो सज्जन भद्र पुरूष रहेछन् । उनले हामीलाई बिनाझन्झट यथासमयमा हाम्रो गन्तव्यमा पुर्‍याएर फर्किए ।
सौराहामा हामीलाई एस डट नेचर वाइल्डका कर्मचारी सुदर्शन चौधरीले न्यानो स्वागत गरे । हिजैदेखि त्यहीँ बसिरहेका कृष्णजीहरु पनि हामी पुगेपछि निकै प्रशन्न भए । खासमा कृष्णजीले मप्रति निकै कृतज्ञता भाव व्यक्त गर्नुभयो ।
राति आठ बजेसम्म धुनी तापेर बसियो । खानपिनपछि आआफ्ना आश्रयस्थलतिर लागियो । बिहान उठ्दा वातावरण चिसो कुहिरोले ढाकिएको थियो । अरुभन्दा छिटो उठेको हुनाले म एक्लै बाहिरतिर लागेँ ।
कम्पाउन्ड गेटबाट बाहिरिनेबित्तिकै हात्ती चढ्ने ठाउँमा पुगिँदोरहेछ । जङ्गल सफारीका लागि मानिसहरु झुन्ड झुन्डमा लाइन लागेर बसेका थिए । केही हात्तीहरु जङ्गलतिर लागिसकेका थिए, केही लाग्ने तरखरमा थिए । भीमकाय ती जनावरका केही स्न्याप फोटो लिएँ मैले । म त्यस्तै काममा अलमलिइरहेकै समयमा अरु साथीहरु पनि आइपुगे ।
ब्रेकफास्टपछि साढे आठ बजेतिर हामी फर्कने तरखरमा लाग्यौँ । लजदेखि बसपार्कसम्म पुग्नका लागि सुदर्शन भाइले भ्यानको व्यवस्था गरिदिएका थिए । उनीहरुसित बिदाबारी भएर हामी बसपार्कतिर लाग्यौँ ।
उही बस, उनै सिट । टिकट पहिले नै बुक गरिएको हुनाले हामीले अगाडिका आरामदायी सिट पाएका थियौँ । साढे नौ बजे सुरू भएको हाम्रो फिर्तीयात्रा बढो रमाइलो र आनन्ददायक थियो । बाटामा गोर्खाबाट ल्याइएका गुलिया सुन्तला र नाना प्रकारका खानेकुरा खाँदै हामी प्रसन्न चित्तले रमाइलो गर्दै हाँसीखुसी फक्र्यौं । दुई बजे नौबिसे टेकेका हामी जामको जन्जालमा पर्दा तीस किलोमिटर पार गर्न तीन सय मिनेट समय खर्चेर बल्लतल्ल बेलुकी सात बजे बालाजु टेक्न आइपुग्यौँ । यसरी, यात्रामा अलिकति हण्डर खाए पनि विविध प्रकारका अनुभवहरु मनमा समेटेर हामी सबै आआफ्ना झोलीतुम्बा बोकेर आफ्ना कुटीतिर सोझियौँ ।